Shuruudaha Adeegga -
Shuruudaha iyo xaaladaha soo socda ayaa xukuma dhammaan adeegsiga mareegaha https://www.bizzoby.com/ iyo dhammaan waxyaabaha ku jira, adeegyada iyo badeecadaha laga heli karo mareegaha (la wada qaatay, Website -ka). Website -ka waxaa iska leh oo maamula Bizzoby ("Bizzoby"). Websaytka waxaa la siiyaa iyada oo ku xiran aqbalaaddaada iyada oo aan wax laga beddelin dhammaan shuruudaha iyo xaaladaha ku jira halkan iyo dhammaan xeerarka kale ee hawlgalka, siyaasadaha (oo ay ku jiraan, iyada oo aan xaddidnayn, Bizzoby ee Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah) iyo habraacyada laga yaabo in lagu daabaco waqti ka waqti Boggaan Bizzoby (wadar ahaan, "Heshiiska").
Fadlan si taxaddar leh u akhri Heshiiskan ka hor intaadan marin ama adeegsan Website -ka. Markaad gasho ama isticmaasho qayb kasta oo ka mid ah mareegaha, waxaad oggolaatay inaad ku xirnaato shuruudaha iyo shuruudaha heshiiskan. Haddii aadan ku raacsanayn dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha heshiiskan, markaa ma geli kartid Website -ka ama ma adeegsan kartid adeegyo. Haddii shuruudahan iyo shuruudahan loo tixgeliyo dalab Bizzoby, aqbalaaddu waxay si cad ugu kooban tahay shuruudahan. Websaydhku wuxuu diyaar u yahay oo keliya shakhsiyaadka ugu yaraan jira 13 sano.
Your https://www.bizzoby.com/ Koontada iyo Goobta. Haddii aad ku samaysato baloog/goob Websaydh, waxaad mas'uul ka tahay ilaalinta amniga koontadaada iyo balooggaaga, oo aad si buuxda mas'uul uga tahay dhammaan hawlaha ka dhaca koontada hoostooda iyo tallaabooyin kasta oo kale oo la xiriira baloogga. Waa inaadan ku sifeyn ama u qoondeyn ereyada furaha ah balooggaaga marin habaabin ama sharci darro ah, oo ay kujirto qaab loogu talagalay in lagu ganacsado magaca ama sumcadda kuwa kale, iyo Bizzoby ayaa beddeli kara ama ka saari kara tilmaanta ama erayga muhiimka ah ee ay u aragto inaysan habboonayn ama sharci -darrada ah, ama haddii kale waxay u badan tahay inay sababto mas'uuliyadda Bizzoby. Waa inaad isla markiiba ogeysiisaa Bizzoby adeegsi kasta oo aan la oggolayn ee balooggaaga, koontadaada ama wixii kale ee khalkhal gelinaya amniga. Bizzoby mas'uul kama noqon doonto ficil kasta ama ka -tegitaannada Adiga, oo ay ku jiraan waxyeello kasta oo nooc kasta ah oo ka dhalata falalkaas ama ka -tegitaannadaas.
Mas'uuliyadda Ka-qayb-galayaasha. Haddii aad ku shaqeysid baloog, ka faallo blog, wax ku qor bogga, ku dheji xiriiriyeyaasha bogga, ama haddii kale sameyso (ama u oggolow dhinac saddexaad oo kasta inuu sameeyo) qalab lagu heli karo iyadoo la adeegsanayo Websaydhka (wax kasta oo noocaas ah, "Mawduuc" ), Adigaa gebi ahaanba mas'uul ka ah waxa ku jira, iyo waxyeello kasta oo ka dhalata, Mawduucaas. Taasi waa kiiska iyadoon loo eegin haddii Mawduuca laga hadlayo uu ka kooban yahay qoraal, muuqaallo, feyl maqal ah, ama softiweer kombiyuutar ah. Adoo ka dhigaya waxyaabaha la heli karo, waxaad matashaa oo aad dammaanad qaaddaa in:
soo degsashada, nuqul ka sameynta iyo adeegsiga nuxurka ma jabineyso xuquuqda lahaanshaha, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn xuquuqda daabacaadda, patentka, astaan ​​ganacsi ama xuquuqda sirta ganacsiga, ee dhinac saddexaad kasta;
haddii loo-shaqeeyahaagu xaq u leeyahay hantida aqooneed ee aad abuurto, waxaad (i) ka heshay oggolaansho loo-shaqeeyahaaga inaad ku dhejiso ama soo bandhigto Mawduuca, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn barnaamij kasta oo software ah, ama (ii) laga sugo loo-shaqeeyahaaga ka-dhaafitaan dhammaan xuquuqda ku jirta ama ku jirta Mawduuca;
waxaad si buuxda u fulisay rukhsad kasta oo dhinac saddexaad ah oo laxiriira Mawduuca, oo aad sameysay dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah inaad si guul leh ugu gudubto si aad u dhammeyso isticmaaleyaasha shuruudaha looga baahan yahay;
Mawduuca kuma jiraan ama rakibin wax fayrasyo ​​ah, dixirigoodu, malware, fardaha Trojan ama waxyaabo kale oo waxyeello leh ama wax duminaya;
Macluumaadka ma aha spam, ma aha mashiin ama si aan kala sooc lahayn loo soo saaray, mana ku jiraan waxyaabo ganacsi anshax xumo ah ama aan loo baahnayn oo loogu talagalay in lagu kaxeeyo taraafikada goobaha saddexaad ama kor loogu qaado qiimeynta mashiinka raadinta ee goobaha saddexaad, ama in la sii wado falal sharci darro ah (sida sida phishing) ama qaateyaasha marin habaabinta halka laga helayo sheyga (sida ku dhufashada);
Mawduucu ma aha mid qaawan, kuma jiraan hanjabaadyo ama kicin rabshado ka dhan ah shakhsiyaadka ama hay'adaha, mana jabinayo xuquuqda gaarka ah iyo xayeysiinta ee cid saddexaad;
balooggaagu kuma xayeysiinayo farriimaha elektaroonigga ah ee aan loo baahnayn sida iskuxirka spam ee kooxaha wararka, liisaska emaylka, baloogyo kale iyo bogagga internetka, iyo hababka la midka ah ee dhiirrigelinta ah ee aan la doonayn;
mareegtadaada looma magacaabin hab marin habaabineysa akhristayaashaada oo u maleynaya inaad tahay qof kale ama shirkad. Tusaale ahaan, URL-kaaga ama magacaaga balooggu ma aha magac qof aan adiga ahayn ama shirkad aan ahayn kanaga; iyo
aad haysato, marka laga hadlayo Mawduuc ay ku jiraan koodh kombiyuutar, si sax ah loo kala saaray iyo/ama lagu sifeeyay nooca, dabeecadda, adeegsiga iyo saamaynta alaabta, haddii uu codsaday Bizzoby ama haddii kale.
Adigoo u soo gudbinaya Mawduuca Bizzoby si loogu daro Website-kaaga, waxaad Bizzoby siineysaa liisanka adduunka oo dhan, boqornimada-ka-madaxbannaan, iyo liisanka aan gaarka ahayn si uu u soo saaro, wax-ka-beddelo, ula qabsado oo u daabaco Mawduuca kaliya ujeeddada muujinta, qaybinta iyo kor u qaadida balooggaaga . Haddii aad tirtirto Macluumaadka, Bizzoby wuxuu adeegsan doonaa dadaal macquul ah si looga saaro Bogga, laakiin waxaad qiraysaa in kaydinta ama tixraacyada Mawduuca aan laga yaabo inaan isla markiiba la heli karin.
Iyada oo aan la xaddidin mid ka mid ah matalaadahaas ama dammaanad -qaadyadaas, Bizzoby wuxuu xaq u leeyahay (in kasta oo uusan ahayn waajibka) in, Bizzoby go'aankiisa (i) uu diido ama ka saaro wax kasta oo ku jira fikirka macquulka ah ee Bizzoby, ku xadgudbaya siyaasad kasta ee Bizzoby ama si kasta oo waxyeello leh ama diidmo, ama (ii) joojiya ama diida helitaanka iyo adeegsiga Websaytka qof kasta ama hay'ad kasta sabab kasta ha ahaatee, iyada oo ku xidhan go'aanka kaliya ee Bizzoby. Bizzoby wax waajibaad ah kuma laha inay bixiso lacag celin kasta oo hore loo bixiyay.
Lacag-bixinta iyo Dib-u-cusboonaynta.
Adiga oo dooranaya badeecad ama adeeg, waxaad oggolaatay inaad Bizzoby bixiso hal mar iyo/ama bil kasta ama khidmadaha diiwaangelinta ee la tilmaamay (shuruudaha lacag bixinta dheeraadka ah waxaa laga yaabaa inay ku jiraan isgaarsiinta kale). Lacag-bixinnada is-diiwaangelinta waxaa lagu dallaci doonaa lacag-bixin horudhac ah maalinta aad iska diiwaangeliso Kor-u-qaadis waxayna dabooli doontaa adeegsiga adeegga bil kasta ama muddada rukunka sannadlaha ah sida lagu tilmaamay. Lacag -bixinta lama soo celin karo.
Dib u-habeyn Cusub.
Haddii aadan ogeysiin Bizzoby kahor dhammaadka muddada rukunka ee khuseeya ee aad rabto inaad tirtirto rukun-ka-noqoshada, rukunkaagu si otomaatig ah ayuu u cusboonaysiin doonaa oo waxaad noo oggolaanaysaa inaan aruurino khidmadda sannadlaha ah ama billaha ah ee is-qoritaanka noocaas ah (iyo waliba canshuuraha kasta) adoo isticmaalaya kaarka amaahda ama hab kale oo lacag bixin ah oo aan kuu hayno. Casriyeynta waa la joojin karaa wakhti kasta iyada oo codsigaaga loo soo gudbiyo Bizzoby oo qoraal ah.
Khidmadaha; Bixinta. Markaad iska diiwaangeliso kootada Adeegyada waxaad oggolaatay inaad Bizzoby siiso khidmadaha dejinta khuseeya iyo khidmadaha soo noqnoqda. Lacagaha khuseeya waxaa lagu soo dallaci doonaa qaansheegad laga bilaabo maalinta adeegyadaada la aasaasay iyo kahor isticmaalka adeegyadan. Bizzoby waxay xaq u leedahay inay beddesho shuruudaha bixinta iyo khidmadaha soddon (30) maalmood ka hor ogeysiis qoraal ah oo adiga laguu soo diray. Adeegyada waad joojin kartaa adiga mar kasta soddon (30) maalmood oo ogaysiis qoran ah oo ku socda Bizzoby.
Support. Haddii adeeggaagu ka mid yahay helitaanka taageerada iimaylka mudnaanta leh. "Taageerada iimaylka" waxaa loola jeedaa awoodda lagu codsan karo caawimaad taageero farsamo iimayl ahaan wakhti kasta (iyada oo dadaal macquul ah Bizzoby uu kaga jawaabayo hal maalin shaqo gudaheeda) oo ku saabsan adeegsiga Adeegyada VIP. "Mudnaanta" waxaa loola jeedaa in taageerada ay mudnaanta koowaad siiso taageerada dadka isticmaala heerka ama bilaashka ah https://www.bizzoby.com/ adeegyada. Dhammaan taageerooyinka waxaa loo bixin doonaa si waafaqsan hababka adeegyada caadiga ah ee Bizzoby, habraacyada iyo siyaasadaha.
Mas'uuliyadda booqdayaasha Website. Bizzoby dib uma eegin, mana eegi karo, dhammaan agabka, oo ay ku jiraan softiweer kombiyuutar, lagu dhajiyay Website -ka, sidaas darteedna mas'uul kama noqon karo waxyaabahaas, waxyaabaha la adeegsado ama saameyntooda. Adigoo adeegsanaya Website-ka, Bizzoby ma metelo ama ma tilmaamayso inay taageersan tahay waxa meesha la soo dhigay, ama inay rumeysan tahay in maaddadaas ay sax tahay, waxtar leedahay ama aan waxyeello lahayn. Adiga ayaa mas'uul ka ah taxaddarrada lagama maarmaanka u ah inaad ka ilaaliso naftaada iyo nidaamyada kombiyuutarka fayraska, gooryaanka, fardaha Trojan, iyo waxyaabo kale oo waxyeello leh ama wax burburin kara. Websaydhku wuxuu ka koobnaan karaa waxyaalo meel ka dhac ah, anshax xumo ah, ama si kale loo diidan yahay, iyo sidoo kale waxyaabo ay ku jiraan khaladaad farsamo, khaladaad qoris, iyo khaladaad kale. Websaydhku wuxuu kaloo lahaan karaa waxyaabo ku xadgudba asturnaanta ama xuquuqda xayeysiinta, ama ku xadgudba hantida aqooneed iyo xuquuqaha kale ee lahaanshaha, dhinac saddexaad, ama soo dejinta, koobiyeynta ama adeegsiga taas oo ku xiran shuruudo iyo shuruudo dheeri ah, la sheegay ama aan la cayimin. Bizzoby waxay iska fogeysaa mas'uuliyadda waxyeello kasta oo ka dhalata adeegsiga booqdayaasha Shabakadda, ama soo dejintooda wax kasta oo soo -booqdayaasha ah ee ku jira halkaas.
Mawduucyada Lagu soo saaro Websaydh kale. Dib uma eegin, mana dib u eegi karno, dhammaan agabka, oo ay ku jiraan softiweerka kombiyuutarka, oo laga heli karo websaytyada iyo bogagga ay https://www.bizzoby.com/ xiriiriyeyaasha, iyo isku xirka https: //www.bizzoby .com/. Bizzoby wax awood ah kuma laha websaytyadaas iyo boggaga aan Bizzoby ahayn, mas'uulna kama aha waxyaabaha ku jira ama isticmaalkooda. Adigoo ku xiraya degel aan Bizzoby ahayn ama mareeg, Bizzoby ma metelo ama ma tilmaamayso inay taageersan tahay mareegaha ama boggaas. Adiga ayaa mas'uul ka ah taxaddarrada lagama maarmaanka u ah inaad ka ilaaliso naftaada iyo nidaamyada kombiyuutarka fayraska, gooryaanka, fardaha Trojan, iyo waxyaabo kale oo waxyeello leh ama wax burburin kara. Bizzoby waxay iska fogeyneysaa wax mas'uuliyad ah wixii dhib ah ee ka dhasha adeegsiga degellada iyo bogagga aan Bizzoby ahayn.
Xad-gudubka Sharciga iyo Siyaasadda DMCA. Maadaama Bizzoby uu dadka kale ka codsanayo inay ixtiraamaan xuquuqdeeda hantida aqooneed, waxay xushmeysaa xuquuqda hantida aqooneed ee dadka kale. Haddii aad rumaysan tahay in maaddada ku taal ama ku xidhan https://www.bizzoby.com/ ay ku xad gudubto xuquuqdaada, waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad ogeysiiso Bizzoby si waafaqsan Xeerka Xuquuqda Daabacaadda Millennium Dijital ("DMCA") ee Bizzoby. Bizzoby wuxuu ka jawaabi doonaa dhammaan ogeysiisyada noocaas ah, oo ay ku jiraan sida loo baahdo ama habboon iyada oo ka saareysa agabkii jebinta ama curyaamiyay dhammaan xiriirradii ku saabsanaa xadgudubka. Bizzoby wuxuu joojin doonaa booqdaha booqashada iyo isticmaalka Websaytka haddii, duruufo ku habboon, booqdaha lagu go'aamiyo inuu noqdo ku -xad -gudubka xuquuqda daabacaadda ama xuquuqda kale ee hantida aqooneed ee Bizzoby ama kuwa kale. Xaaladda joojinta noocaas ah, Bizzoby wax waajibaad ah kuma laha inay bixiso lacag celin kasta oo hore Bizzoby loo siiyay.
Hantida aqooneed. Heshiiskani kaama wareejin doono Bizzoby wax kasta oo Bizzoby ah ama hanti aqooneed oo dhinac saddexaad ah, iyo wax kasta oo xaq ah, lahaanshaha iyo xiisaha ku jira iyo hantidaas ayaa sii ahaan doona (sida dhinacyada dhexdooda) oo keliya Bizzoby. Bizzoby, https://www.bizzoby.com/, astaanta https://www.bizzoby.com/, iyo dhammaan summadaha kale, astaamaha adeegga, garaafyada iyo astaamaha loo adeegsaday xiriirinta https://www.bizzoby.com /, ama Websaydhku waa summadaha ama alaabooyinka ka diiwaan gashan Bizzoby ama Bixiyeyaasha Bizzoby. Astaamaha kale ee ganacsiga, sumadaha adeegga, garaafyada iyo astaamaha loo adeegsado Websaytka ayaa noqon kara summadaha dhinacyada kale ee saddexaad. Isticmaalkaaga Website-ku kuma siinayo xaq ama ruqsad si aad u soo saarto ama si kale u isticmaasho wax kasta oo Bizzoby ah ama alaab-dhinac saddexaad ah.
Xayeysiisyada. Bizzoby wuxuu xaq u leeyahay inuu ku muujiyo xayeysiisyada ku jira balooggaaga haddii aadan iibsan xisaab aan xayeysiis lahayn.
Iskudarid. Bizzoby wuxuu xaq u leeyahay inuu muujiyo isku xirnaanta sifaynta sida 'Blog at https://www.bizzoby.com/,' 'mawduuca mawduuca, iyo astaanta astaanta ee boggaaga blog ama aaladda qalabka.
Waxyaabaha Iskaashiga ah Adoo ka shaqeynaya sheyga lamaanaha (tusaale ahaan mawduuca) mid ka mid ah shuraakadayada, waxaad ku raacsan tahay shuruudaha adeegga lamaanahaas. Waad ka bixi kartaa shuruudaha adeeggooda wakhti kasta adoo ka furaya sheyga lamaanaha.
Domain Names. Haddii aad diiwaangelinayso magac domain, adeegsiga ama wareejinta magac domain hore u diiwaangashan, waad qiraysaa oo aad oggoshahay in adeegsiga magacaas uu sidoo kale ku xiran yahay siyaasadaha Shirkadda Internetka ee loogu talagalay Magacyada iyo Lambarada Loo Qoondeeyay ("ICANN"), oo ay ku jiraan Xuquuqda Diiwaangelinta iyo Waajibaadka.
Isbedelada. Bizzoby waxay xaq u leedahay, iyada oo keli ah, inay wax ka beddesho ama beddesho qayb kasta oo ka mid ah Heshiiskan. Waa mas'uuliyaddaada inaad si joogto ah u hubiso Heshiiskan wixii isbeddel ah. Isticmaalkaaga sii socda ama gelitaanka Website -ka ka dib dhajinta wixii isbeddel ah ee Heshiiskan ayaa ka dhigan aqbalaadda isbeddeladaas. Bizzoby ayaa sidoo kale, mustaqbalka, ku bixin karta adeegyo cusub iyo/ama astaamo mareegaha (oo ay ku jirto, sii -deynta qalab iyo ilo cusub). Tilmaamahan cusub iyo/ama adeegyadan cusub waxay ku xirnaan doonaan shuruudaha iyo shuruudaha Heshiiskan.
Joojinta. Bizzoby ayaa laga yaabaa inay joojiso gelitaankaaga dhammaan ama qayb kasta oo ka mid ah Websaytka waqti kasta, sabab ama sabab la'aan, ogeysiis la'aan ama ogeysiis la'aan, isla markiiba hirgasha. Haddii aad rabto inaad joojiso Heshiiskan ama koontadaada https://www.bizzoby.com/ (haddii aad mid leedahay), waxaad si fudud u joojin kartaa adeegsiga Website -ka. In kasta oo aan kor ku soo sheegnay, haddii aad leedahay koonto adeegyo lacag leh, koontadaas waxaa joojin kara Bizzoby oo keliya haddii aad si wax -ku -ool ah u jebiso Heshiiskan oo aad ku guuldareysato inaad ku daaweyso jebintaas soddon (30) maalmood gudahood laga bilaabo ogeysiiska Bizzoby; haddii ay taasi jirto, Bizzoby waxay isla markiiba joojin kartaa Website -ka iyada oo qayb ka ah xidhitaanka guud ee adeeggayaga. Dhammaan qodobbada Heshiiskan oo dabeecad ahaan ay tahay inay ka badbaadaan joojinta ayaa badbaadin doona joojinta, oo ay ku jiraan, iyada oo aan xaddidnayn, qodobbada lahaanshaha, sheegidda dammaanadda, magdhawga iyo xaddidnaanta mas'uuliyadda.
Diidmada Warqadaha. Websaydhku wuxuu bixiyaa "sida uu yahay". Bizzoby iyo alaab-qeybiyeyaasha iyo shati-bixiyeyaasha waxay halkan ku diidayaan dhammaan damaanad-qaadyada nooc kasta ha ahaadeen, muujiyeen ama tilmaameen, oo ay ku jiraan, iyada oo aan xaddidnayn, dammaanadaha baayacmushtarka, u-qalmitaanka ujeedo gaar ah iyo ku-xadgudub la'aan. Midkoodna Bizzoby iyo alaab -qeybiyeyaasha iyo shati -bixiyeyaasha, ma sameeyaan wax dammaanad -qaad ah oo ah in Mareegaha uu khalad xor yahay ama gelitaanku uu noqon doono mid joogto ah ama aan kala go 'lahayn. Waxaad fahansan tahay inaad ka soo dejisanayso, ama haddii kale aad ka hesho nuxur ama adeegyo, Website -ka ikhtiyaarkaaga iyo khatartaada.
Xaddidaadda Mas'uuliyadda. Dhacdo kasta Bizzoby, ama alaab -qeybiyeyaasha ama shati -bixiyeyaasha, ayaa mas'uul ka noqon doona mawduuc kasta oo ka mid ah heshiiskan heshiis kasta, dayacaad, mas'uuliyad adag ama aragti kale oo sharci ama sinnaan ah: (ii) qiimaha iibsiga badeecadaha ama adeegyada beddelka ah; (iii) joojinta isticmaalka ama luminta ama musuqmaasuqa xogta; ama (iv) qaddar kasta oo ka badan khidmadaha aad Bizzoby ku siisay heshiiskan inta lagu guda jiro laba iyo toban (12) bilood ka hor sababta falka. Bizzoby wax mas'uuliyad ah kuma laha guuldarad kasta ama dib -u -dhac ku yimaada arrimo ka baxsan awoodooda macquulka ah. Waxyaabaha aan kor ku soo sheegnay ma khuseeyaan ilaa inta sharcigu mamnuucayo.
Wakiil Guud iyo Gargaar. Waxaad wakiil ka tahay oo dammaanad qaadaysaa in (i) isticmaalkaaga Mareegaha uu si adag u waafajin doono Siyaasadda Qarsoodiga ee Bizzoby, Heshiiskan iyo dhammaan sharciyada iyo qawaaniinta khuseeya (oo ay ku jiraan iyadoon la xadidin sharciyada maxalliga ah ama xeerarka dalkaaga, gobolkaaga, magaaladaada , ama aag kale oo dawladeed, oo khuseeya anshaxa onlaynka ah iyo nuxur la aqbali karo, oo ay ku jiraan dhammaan sharciyada khuseeya gudbinta xogta farsamo ee laga dhoofiyay Maraykanka ama waddanka aad ku nooshahay) iyo (ii) adeegsigaaga Website -ku ma jabin doono ama ku takri fala xuquuqda hantida aqooneed ee cid kasta oo saddexaad.
Magdhawga. Waxaad oggolaatay inaad magdhawdo oo aad haysato Bizzoby aan waxyeello lahayn, qandaraaslayaasheeda, iyo shati bixiyeyaasha, iyo agaasimayaashooda, saraakiisha, shaqaalaha iyo wakiillada ka soo horjeeda iyo wax kasta iyo dhammaan sheegashooyinka iyo kharashyada, oo ay ku jiraan khidmadaha qareennada, ee ka dhashay adeegsigaaga Website -ka, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn ku xad -gudubka Heshiiskan.
Waxyaabo kala duwan. Heshiiskani wuxuu ka kooban yahay dhammaan heshiiskii u dhexeeyay Bizzoby iyo adiga ee ku saabsanaa mawduuca halkan ku qoran, waxaana kaliya wax laga beddeli karaa wax -ka -beddel qoraal ah oo uu saxeexay fuliyaha idman ee Bizzoby, ama dhejinta Bizzoby ee nuqulka dib loo eegay. Marka laga reebo xadka sharciga lagu dabaqi karo, haddii ay jirto, si kale wax u bixineyso, Heshiiskan, galaangal kasta ama isticmaalka Websaytka waxaa xukuma sharciyada gobolka California, USA, marka laga reebo khilaafaadka qaanuunka sharciga, iyo goobta ku habboon wixii khilaaf ah ee ka dhasha ama la xiriira mid la mid ah waxay noqon doonaan maxkamadaha gobolka iyo kuwa federaalka ee ku yaal Degmada San Francisco, California. Marka laga reebo sheegashooyinka ka -reebitaan amar -bixin ama sinnaan ama sheegashooyin ku saabsan xuquuqda hantida aqooneed (oo laga yaabo in la keeno maxkamad kasta oo karti leh iyada oo aan la soo dirin dammaanad), muran kasta oo ka dhasha Heshiiskan ayaa ugu dambayn la xallin doonaa iyadoo la raacayo Xeerarka Dhexdhexaadinta Guud ee Dhexdhexaadinta Garsoorka iyo Adeegga Dhexdhexaadinta, Inc. ("JAMS") saddex garsoore oo loo magacaabay si waafaqsan Xeerarkaas. Dhexdhexaadintu waxay ka dhici doontaa Degmada San Francisco, California, iyadoo ku qoran luuqadda Ingiriisiga waxaana laga yaabaa in go'aanka garqaadaha lagu fuliyo maxkamad kasta. Dhinacyada jira talaabo kasta ama sii wadida dhaqan gelinta Heshiiskan waxay xaq u yeelan doonaan kharashyada iyo ujrada qareenada. Haddii qayb ka mid ah Heshiiskan lagu qabto mid aan ansax ahayn ama aan la fulin karin, qaybtaas waxaa loo fasiri doonaa inay ka tarjumeyso ujeeddadii hore ee dhinacyada, qeybaha soo harayna waxay ahaan doonaan kuwo si buuxda u dhaqan gala. Ka -dhaafitaanka labada dhinac mid kasta oo ka mid ah xilli kasta ama shuruudda Heshiiskan ama jebinta kasta, si kasta oo ay ahaataba, kama tanaasulayo muddadaas ama xaaladdan ama jebintiisa dambe. Waxaad ku wareejin kartaa xuquuqdaada Heshiiskan dhinac kasta oo oggolaada, oo oggolaada in lagu dhaqmo, shuruudaha iyo shuruudaha; Bizzoby waxaa laga yaabaa inay ku xilsaarato xuquuqdeeda Heshiiskan shuruud la'aan. Heshiiskani wuxuu noqon doonaa mid ku -meelgaar ah oo u hirgelin doona faa'iidooyinka dhinacyada, kuwa ka dambeeya iyo meelaynta la oggol yahay.
Iib by SiteGround